‘याे गणतन्त्र हाे कि बन्दुकतन्त्र हाे ?’
कार्तिक ५, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयाेगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मुलुककाे मानव अधिकारकाे अवस्था खराब बनेकाे भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । साेमबार जनअधिकार अभियान नेपालको चौथो साधारणसभा तथा मुखपत्र आवाजकाे बिमाेचन गर्दै अध्यक्ष शर्माले अहिलेपनि पञ्चायतकालिन शैली जस्ताे अवस्था देखिएकाे टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘हामीले व्यवस्था परिवर्तन त गर्यौ तर त्यस अनुसार आचरण भयाे कि भएन भन्ने मुख्य विषय हाे तर म आचरण पुरानै देख्छु ।’ उनले गणतान्त्रिक ब्यवस्थामा पनि मानबअधिकार सुरक्षित नभएकाे भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले याे गणतन्त्र हाे कि बन्दुकतन्त्र छुट्याउन गाह्राे भएकाे टिप्पणि समेत गरे ।
उनले भने, ‘म असन(काठमाण्डाैं) मा हुर्क्या बढ्या मान्छे अनि एउटा जाेक चल्छ गणतन्त्र कि गनतन्त्र ? गनतन्त्र भनेकाे बन्दुकले सबैलाई सिध्याउने भनेकाे हाे कि ? गणतन्त्र अर्थात महादेवकाे उत्ताउला गणहरूकाे तन्त्र हाे कि ? गन भनेकाे नेवारीमा कता भन्ने हुन्छ अर्थात कता गयाेतन्त्र हाे कि ? ।’ उनले विचार र आस्थाकै आधारमा कसैलाई पनि गिरफ्तार गर्न नहुनेमा जाेड दिए ।
नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले बृहत् शान्ति सम्झाैता सहि ढंगले निस्कर्षमा नपुग्दा अहिले राजनीतिक तरलता देखिएकाे टिप्पणी गरिन् । उनले भनिन्,` सायद शान्ति प्रकृया सही ढंगले निष्कर्षमा पुगेकाे भए फेरि अहिलेकाे व्यवस्थामा प्रश्न उठ्ने थिएन कि, विप्लव जि किरण जिहरू बाहिर अहिले किन बाहिर हुनुहुन्छ ? संसद कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले मानवअधिकारको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको टिप्पणी गरे ।
नेता आहुतिले बिचार र आस्थामाथिकाे प्रतिबन्धले समस्या समाधान नहुनेमा जाेड दिए । उनले विचार र आस्थाकै आधारमा देशभर धरपकड गरिएकाे भन्दै संविधानमा लेखिएकाे माैलिक हक सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा नागरिक आन्दोलनका अगुवा डाक्टर सुन्दरमणि दिक्षितले सरकारको कार्यशैली गम्भीर भएको दाबी गरेका छन् ।
जनपत्रकार संगठन नेपालका अध्यक्ष प्रकाश डुम्रेले देशभर विचार र आस्थाका आधारमा आफ्ना संगठनका साथिहरू गिरफ्तार गरिएकाे भन्दै आपत्ति जनाए । सामाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ गर्ने र सर्वाेच्च अदालतकाे आदेशमा रिहा हुदा पनि पटक पटक पक्राउ गर्ने गरिएकाे भन्दै सबैकाे ध्यानाकर्षण गराए । कार्यक्रममा तक्मा केसी, अधिकारकर्मी डा.कपिल श्रेष्ठ, सरला रेग्मी, भवानी खरेल, शान्ता भण्डारी लगायतले आफ्नाे धारणा राखेका थिए ।
प्रकाशित मिति : २०७६ कार्तिक ५ गते मङ्गलवार